ဘယ်လိုထုတ်ယူနိုင်မလဲ? – FBS
အရေးကြီးအချက်အလက်! ကျေးဇူးပြု၍ ဖောက်သည်သဘောတူညီချက် အရ ထည့်စဉ်းစားပါ: ဖောက်သည်သည် သူတို့၏အကောင့်မှ ငွေသွင်းရန် အသုံးပြုထားသော ငွေပေးချေမှုစနစ်များသို့သာ ငွေများကို ထုတ်ယူနိုင်သည်။
ပြည်တွင်းဘဏ်များရနိုင်သော ဒေသများတွင်၊ နောက်ပိုင်း (အမြတ်များ၊ အပိုဆုငွေများ၊ ဆုများ၊ ပါတနာကော်မရှင် စသည်တို့အား) ပြည်တွင်းဘဏ်များတွင်သာ ထုတ်ယူသင့်ပါသည်။ ပါစင်နယ်ဧရိယာတွင် ပြည်တွင်းဘဏ်များ မရ နိုင်ပါက၊ အမြတ်များကို e-walletများ (သို့) ငွေလဲလှယ်ရောင်းချသူများမှတဆင့် ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဖောက်သည်သည် ငွေကြေးလုပ်ဆောင်ချက်များအတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်/အယောင်ပြ ငွေကြေးများသုံးပါက၊ ဖောက်သည် ငွေထုတ်ယူချိန်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတစ်ခုစီအတွက် သီးသန့် walletတစ်ခုသာ သုံးရန်တာဝန်ယူရမည်။
ပါစင်နယ်ဧရိယာ ရှိ သင့်အကောင့်တွင် ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
စာမျက်နှာထိပ်နားရှိ "ငွေကြေးများ"ကို နှိပ်ပါ။
သင့်လျော်သော ငွေပေးချေမှုစနစ်ကို ရွေးချယ်ပြီး ၎င်းကိုနှိပ်ပါ။
သင်ငွေထုတ်လိုသော အရောင်းအဝယ်အကောင့်ကို သတ်မှတ်ပါ။
သင်၏ e-wallet သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုစနစ်အကောင့်အကြောင်း အချက်အလက်ကို သတ်မှတ်ပါ။
ကတ်မှတစ်ဆင့် ငွေထုတ်ရန်အတွက် သင့်ကတ်မိတ္တူ၏ နောက်ကျောနှင့် ရှေ့ခြမ်းကိုတင်ပေးရန် “+” သင်္ကေတကို နှိပ်ပါ။
"ငွေထုတ်ယူမှု အတည်ပြုပါ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ငွေထုတ်ယူမှုကော်မရှင်ခသည် သင်ရွေးလိုက်သော ငွေချေစနစ်ပေါ်တွင် မူတည်ကြောင်း ထည့်စဉ်းစားပေးပါ။
ငွေထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အချိန် သည်လည်း ငွေပေးချေမှုစနစ်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ငွေအလွှဲအပြောင်းမှတ်တမ်း တွင် သင့်ငွေကြေးတောင်းဆိုမှုများ၏ အခြေအနေကို သင်စောင့်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၅.၂.၈ အရ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အားအသိပေးပါရစေ။ အကောင့်ထံ debit (သို့) credit ကဒ်မှငွေထည့်ခဲ့ပါက၊ ငွေထုတ်ယူရန် ကဒ်မိတ္တူလိုအပ်ပါသည်။ မိတ္တူတွင် ကဒ်နံပါတ် ပထမ ၆လုံးနှင့် နောက်ဆုံး ၄လုံး၊ ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ အမည်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်နှင့် ကိုင်ဆောင်သူ၏ လက်မှတ်ပါရမည်။
ကဒ်နောက်ကျောဘက်ရှိ CVVကုဒ်ကို ဖုံးထားသင့်ပါသည်; ကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။
ကဒ်နောက်ကျောဘက်တွင်၊ ကဒ်သက်တမ်းကို အတည်ပြုပေးမည့် အမှတ်အသားကိုသာ ကြည့်ရန်လိုပါသည်။